Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Misokatra ao Beverly Hills ny Hotely AC voalohany an'ny Los Angeles an'i Marriott
Ao amin'ny faritra iray fantatra amin'ny fanafarana an-tsokosoko, mahafinaritra ny misongadina. Ary ny AC Hotel Beverly Hills, ilay toerana voalohany monina ao Los Angeles ho an'ny marika hotely fomba fiaina misy tarika Eoropeana, AC Hotels by Marriott, dia manao izany. Novokarin'ny Properties azo antoka sy Seaview Investors, ary tantanan'ny Interstate Hotels & Resorts, nosokafana tamin'ny 6399 Wilshire Blvd ny trano vaovao, akaikin'ny sary sy kolontsaina sy fivarotana malaza toa an'i Rodeo Drive, The Grove, Museum of Art of County (LACMA) any Los Angeles County, Petersen Automotive Museum sy ny Beverly Center.
Ilay havoana Art Deco tany am-boalohany tao amin'ny AC Hotel Beverly Hills dia nandrafitra ilay trano fandraisam-bahiny misy rihana 11 ao amin'ny lova ara-tantara arahin'i Wilshire Boulevard. Raha vantany vao tafiditra ao anatiny, ny tetezamita dia mifindra amin'ny fifangaroan'ny fanahy eropeana AC sy ny fakany Espaniôla, teraka tamin'ny fahitana sonia an'ilay hotely fanta-daza Antonio Catalan izay namorona ny marika AC tany Espana tamin'ny taona 1998. Notarihin'ny filozofia namorona ny famolavolana kendrena Design Force Co. dia nampifangaro ny hatsaran-tarehy voajanahary AC Hotels miaraka amin'ny loko manankarena sy endrika geometrika izay entanin'ny fomban'ny Beverly Hills.
"Faly izahay fa hanomboka ny hotely AC Hotels any Marriott any Los Angeles miaraka amin'ny fanokafana ny AC Hotel Beverly Hills," hoy i Benoit Racle, Global Brand Leader, AC Hotels avy amin'i Marriott. "Ity trano fandraisam-bahiny vaovao ity dia miorina amin'ny toerana tena izy ary namboarina miaraka amina fanahy mahay mandanjalanja, mpandehandeha be, miasa ao an-tsaina, manome azy ireo kanto eran-tany kanto amin'ny aingam-panahy, zava-pisotro zava-pisotro sy fandaharana sakafo ary serivisy intuitive."